कसरी गर्दैछ सरकारले भारतमा अलपत्र नेपालीको उद्धार ? | Sagarmatha TV
कसरी गर्दैछ सरकारले भारतमा अलपत्र नेपालीको उद्धार ?
काठमाण्डौ– सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्दारका लागि पहल थालेको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि गएकाहरुको विवरण सरकारसँग भए भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याँक छैन ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले भारतमा धेरै नेपालीहरु अलपत्र छन् । उनीहरु उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् ।
सीमा नाका बन्द गरेको दुई महिनापछि सरकारले उनीहरुको उद्धार गर्ने बृहत कार्ययोजना बनाएको छ । यो योजना मन्त्रिपरिषदबाट पनि पारित भइसकेको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरे पनि भारतमा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको लागि विभिन्न नाकाहरु ताेकिएकाे छ ।
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीका लागि १८ जिल्लाका २० नाका नेपाल प्रवेशका लागि तोकिएका छन् ।
भारतबाट फर्कनेहरुका लागि प्रवेश बिन्दु नजिकैको स्कुल तथा समुदायिक भवन, पाटी प्यालेस वा कर्भड हल लगायत उपयुक्त स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइने छ ।
होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेना तथा जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सहयोगमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले गर्नेछ ।